Lower Kyiminhtdai, Yangon.
၀၁-၂၃၀၂၂၈၅, ၀၁-၂၃၀၂၂၈၆, ၀၁-၂၃၀၂၂၈၇
Joint Inspection Announcement
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်များဖြစ်သောဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်နှင့်ခရမ်းမြို့နယ်များတွင်စတိုအဖြစ်ထားရှိမည့်ပေ(၄၀) ကွန်တိန်နာ(၂)လုံးအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘတ်ဂျတ်ပါလုပ်ငန်းဖြစ်သော ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဌာနရှိ မီးစက်များအသုံးပြုရန် စက်လည်ရန် လောင်စာများ (ဒီဇယ်ဆီ) (၁၇၃၄၀)ဂါလံအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှအောက်ဖော်ပြပါမြို့နယ်များမှ အဆောက်အဦများ၏ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်ရုံးများတွင် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံ ရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်းရေးသွင်း၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက် ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန...
© 2021 by YESC. Powered by MEGA MYANMAR LINK